डेंगु Archives - Lokpath Lokpath
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले डेंगु रोगबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिएको स्पष्ट पारेको छ । डेंगु रोगबारे आवश्यक अनुसन्धान समेत नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेका बेला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले
हिमाली जिल्ला मनाङमा पनि डेंगुको संक्रमण फैलियो
काठमाडौँ । हिमाली जिल्ला मनाङमा समेत डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार साउन १ गतेदेखि भदौ
नेकपाका नेता बामदेव गौतमलाई पनि डेंगु ! यी हुन् डेंगुका लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई डेंगु लागेको आशंका गरिएको छ । शनिबारबाट उच्च ज्वरो आएपछि डेंगुको आशंकामा उहाँ अस्पताल पुग्नुभएको थियो । उहाँले सोमबार
डेंगुको उपचारपछि डिस्चार्ज भए कृषि मन्त्री खनाल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल सोमवार अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको छ । डेंगुको संक्रमण देखिएपछि टोखास्थित ग्रान्डी अस्पतालमा ५ दिन उपचार गरी मन्त्री खनाल आज डिस्चार्ज हुुनुभएको
नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई पनि डेंगु,यी हुन् १० लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं – नेत्र विशेषज्ञ प्रा.डा. सन्दुक रुइतलाई पनि डेंगु भएको छ । डेंगुको संक्रमणपछि उहाँलाई थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । रुईतसहित परिवारका तीन जनालाई डेंगुको संक्रमण भएको छ
७० हजार नेपालीमा डेंगु ! यस्ता छन् १० लक्षण र बच्ने उपाय
लोकपथ / काठमाडौं डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो । यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ ।